FSX Kuwedzera 2D pop up Panels & switches
mubvunzo FSX Kuwedzera 2D pop up Panels & switches
1 gore 2 ago #976 by DRCW
Sezvo vazhinji venyu munoziva kuti pane zvakawanda zvekuwedzera- ndege dzisingabhadhari uye kubhadharwa. Ndege dzakawanda dzisina mahwanda dzine mabhugi
uye vanoda rubatsiro rwekuita kuti vashandise zvakanaka apo vamwe vasina kungoita zvinhu zvamunotarisira. Vamwe vane
FMC's / LNAV & VNAV zvimwewo ... Zvimwe zvinoshaikwa zvirongwa zvinokubvumira kushandisa ILS nekusvika seG GPS /
Nav-Gps switching etc ... Kune vamwe vanoita vasingadi kudzidza kana kuti vanopedza maawa vachidzidza mitsva itsva. Saka
iwe unogona sei kuita ndege yaunofarira neyezvinhu zvakanyanyisa zvinomhanya zvakanyanya seyo ndege isina kukwana? Pop up 2D
Tisati tatanga, ndinofanira kushevedzera chido chekugara muchidzorera ndege ndege cfg uye mapuranga ezvo kana iwe ukanganisa
kuti iwe haugoni kururamisa, iwe unongotevedzera uye unamate zvakadzokera shure uye kudzorera ndege kumamiriro ekutanga.
FSX ine huru iyo inoshandisa iyo inowanzogovana 2D panels, mwenje, switch etc ... Aya mafaira makuru
MuGauges folda iwe uchawana GPS / Radio Stacks / Autopilot Systems / Switches uye imwe mimwe mapaundi
mifananidzo pamwe chete ne XML neDLL mafaira anotaura mashoko aya kune ndege yako sim sim zvinhu. Chinhu chokutanga isu
Unofanira kuita kuumba faira yezvikamu izvi kuitira kuti iwe ugofanira kuvatarisa nguva dzose iwe unoda kuisa
ivo vari mundiza yawakangosunungura.
Dhodza Kutanga / Zvinyorwa / Tsvafisi itsva / Kwofa zorudyi uye tumidza iyo faira "2DPanels" uye uikudze kure desktop yako.
Iva nechokwadi chokuti une "notepad pane pakombiyuta yako zvakare" nokuti kana tangokopa mafaira emapapanhau mumutsamba
, iwe uchazoisa pasi yako "2Dpanels" folda.
Kuita kuti zvive nyore zvinhu zvose zvaunoda kuita ndeyekukopa pasi apa:
ZVINOONERA = 0
Ita kuti tifambe pamusoro pezvatakadhonza.
Chikamu chekutanga ndeyeredhiyo yakavhara 2D panhotera kubva kuC172
Chikamu chechipiri ndiyo GPS500 2D panel zvakare kubva kuC172
Chikamu chechitatu ndechijeri che 2 chinoita Nav / Gps kushandura kweC172
Chikamu chiri kunze iawa kubva kuB747-400
Iwe unogona kuwedzera zvimwe kune firiji ye2D kusanganisira pane mapepa makuru uye nezvimwe zvakawanda uye nenzira iyo ivo vose vachawanikwa
mune imwe faira. Ichaita kuti kugadzira ndege kuve nemhepo.
Iye zvino regai tsvaga kuti ndege idzidzise kuisa mapeji aya mukati. Ramba uchiyeuka kuti zvese zvepamusoro zvepamusoro zvandakatora kubva
iyo sim zvinhu / airpanes folda ndeyese mafaira cfg. Icho chaiyo gauges uye kushanduka kunobva majiji makuru
faira muFSX. Mune mamwe mazwi inotungamirira mune faira yakagoverwa kwezvikwata zvakawanda.
Nokuda kwemuenzaniso uyu tinokwanisa kuisa zvose zvepamusoro pane Dhigirii DC3.
Kutanga, iwe uchada kuzarura fomati yefolda yeDVD3 / Simobjects / Airplanes / Douglas_DC3 / panel / yevhura
Chikamu chepamusoro chichaverengwa nenzira inotevera:
// Copyright © 2002 Microsoft Corporation. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Window05 = Zvimwe Zvirongwa
Tichatanga kuwedzera zvinotevera pasi Window06
Iye zvino Fura pasi kusvikira iwe uchiwana chikamu [Window06]
chinzvimbo = 7
mwana_3d = 1
Ita nzvimbo pasi pechikamu chepamusoro uye uwedzere
Iwe zvino wanyora Radio Stack iyo inosanganisira akazvigadzirira kuDVD3.
Hatidi kuisa chikamu chechipiri mukati nokuti chave chiripo (GPS)
Neyero yepamusoro yeredhiyo uye yekuzvipira mumagetsi zvatinogona sei iye zvino tinoshandisa ndege yekuuya kweI ILS? Kwete ... Tinoda
kuti uise switch Nav / Gps kuDVD3 2D panel pane zvinotevera:
faira = DC3_background.bmp
oneka = 1
gauge23 = Douglas_DC3! kakawanda, 744, 578
gauge37 = SimIcons1024! Mepu Icon, 83, 725
gauge42 = SimIcons1024! Zvimwe Zvirongwa Icon, 106, 748
Pasi peji gauge43 kopi uye nyora zvinotevera:
gauge44 = Lear_45! Nav GPS Shanduka, 160, 420, 25, 40
Shandisa gauge12 = Douglas_DC3! Radio_compass, 177, 582 ne gauge12 = CessnaWAlpha! VOR1_Alpha, 175,579, 151, 151
Izvi zvinotora nzvimbo yekambasi yekasiyoji yegeji neVOR Gauge uye ini ndakaiita zvakare kuti ienderane nenzvimbo yacho.
Iye zvino iwe unogona kuita ILS kuenda kune DC3 pamwe chete neA GPS inotenderera ndege maoko mahara!
The Nav / Gps Switch ichava kurudyi yenguva yendege uye iyo yose yeVOR1 yeji uye Nav / Gps switch inogadziriswa
kune jeri (kwete Pop Up) Unogona kutamisa kushandura uye majiji chero kupi zvako waunoda ivo. Ndakavaisa kwaunogona
vawane ivo vasina kurasikirwa pane mamwe majiji. Kana ukazviisa pairiji iripo hazvizoonekwi uye
iwe unofanirwa kuvhara pajiji kuti uzviwane. Heano kuparara kwekuti ungavaisa sei:
1) gauge46 = Lear_45! Nav GPS Shanduko (ichi ndicho chiyero pachavo uye FSX inotarisa iyo inoyera mukati mejiyo huru yefaira)
2) 160, 420, 25, 40 Iyi nhamba ndiyo nzvimbo pachikanda chako uye ukuru hwejeri.
Nhamba yekutanga 160 ndiyo ibva kubva kurutivi rworuboshwe rwekona kusvika kurudyi
Nhamba yechipiri 420 ndiyo ibva kubva kumusoro kwekona kusvika pasi
Nhamba yechitatu 25 ndiyo yakakura yejiji kubva kuruboshwe kuenda kurudyi
Iko nhamba ye40 iyo yakaenzana neyeriji kubva kumusoro kusvika pasi
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro peCeg's ini ndaisa mu thread mune aya maforums FSX General ane zita rokuti "FSX Full and Complete definitions
Unoda kuita zvakawanda neyo ndege? Tarisa michero yangu muFSX Zita rakadanwa (Fara neFreeware ndege)
Kune zvikamu zvitatu panhau iyi. Iwe unogona kunge wakacherechedza kuti handina kuwedzera 747-400 clock mumurayiridzo uyu. Ini
unoda kuona kana iwe uchigona kuzviitira iwe pachako. Kana iwe uchiri nechinetso, sununguka kupindura uye kuyeuka
Pane "HERE KUNYAYA IYE SOMUBVUNZO WEMUBUMBU" mhinduro yakaipa.
1 gore 2 ago #977 by Gh0stRider203
KUNYANYA kuverenga chero ipi zvayo ndisati ndanyora. EXCELLENT POST!
MWARI Anoziva kangani ini ndakafanira kuita izvi nokuti ndege yakanga isina chinhu. PASI pfupi, ndaifanira kuita izvi neConnie, pamwe ne Falcon 7X (iyo ine HORRID yakakwana isingakwanisi kuzvigadzirira - ndege huru kunze kweiyo!) ... kunyange ndisina kuongorora Falcon 7x se asi lol. mune imwe nguva zvichida
Ndakagadzira 172 radio stack yakaenda kune Connie sezvo yakanyanya kunge isina ine autopilot yakakodzerwa nemakwikwi akawanda evanhu.
1 gore 2 ago #978 by DRCW
Ndinokutendai shamwari yangu, tinodikanwa kubatsira vatsva, ini ndichataura mashoko angu, "ruzivo chinhu chinokosha kunze kwecho, kuraira musina kukwana"
1 gore 2 ago #979 by Gh0stRider203
Ndakatadza kubvumirana zvimwe !!!! Iwe wakave wakanyanyisa kuvhara Bhokisi rangu rekuda, uye wakabata maziso angu. Zvakanaka kuva newe mubhobho.
1 gore 2 ago #985 by DRCW
Iwe unoziva izvo zvandinoda zvichitarisa kuzvipira? Icho chaipo pano pa rikooo mu Falcon 50. Iwe unogona kudzora ndege irizaira iwe uchiri kutarisa pamusoro pemapiro, tanga iwe kubva, shandura airspeed, kutungamira nekuramba uchinakidzwa nezvinhu zvose zviri pasi apa. Ndine madhora $ 4000 munzvimbo dzakanaka uye mhepo, uye ndege. Dzimwe nguva ndinonakidzwa nokushanda FMC uye ndiri muchiteshi chekubhururuka, asi kune vamwe, ndinoda kunakidzwa nehuwandu hwekutsvaga kwandinoita semunhu anofamba. Ikosikiti 50 2D inoita zvekugadzirira iyo ndiyo yakanakisisa nokuda kwechinangwa ichi.
Time chokusika peji: 0.264 mumasekonzi